Igumbi eliphindwe kabini, igumbi lokuhlambela iindwendwe kunye ne-WiFi yasimahla - I-Airbnb
Igumbi eliphindwe kabini, igumbi lokuhlambela iindwendwe kunye ne-WiFi yasimahla
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguZoran
Igumbi eliphangaleleyo elinelanga kusasa, iifestile ezinkulu kunye negumbi lokuhlambela elikumgangatho ophezulu kunye nezinye iindwendwe. Ikhitshi kunye negumbi lokutyela likhululekile ukusebenzisa logama nje ucoca emva kokuzisebenzisa. Iivenkile ezinkulu, ii-pubs kunye nezinye izinto ezithathwayo kumgama wokuhamba. I-WiFi efanelekileyo kodwa akukho TV. Ngaphambi kwendlu kukho indawo yokumisa iibhasi ngoko kusasa usenokuva ingxolo. Ikati enobubele endlwini.
Igumbi libekwe kumgangatho ophantsi. Indlu inkulu kwaye inegadi ethandekayo ngasemva. Amagumbi okuhlambela amabini akumgangatho wokuqala (enye yeyabantu abaza kusetyenziswa ziindwendwe kuphela) kwaye kumgangatho osezantsi kukho indlu yangasese eyongezelelweyo efumaneka kufutshane nekhitshi kunye negumbi loncedo.
Iindawo ezi-2 zokupaka simahla kwizakhiwo.
4.81 · Izimvo eziyi-105
Idolophu ethe cwaka
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Leicestershire